संविधान अब कहिले त ?-NepalKanoon.com
संविधान अब कहिले त ?
माघ ९, काठमाडौं । माघ ८ मा संविधान आउँछ भनियो,संविधान होइन,मस्यौदा होइन प्रारम्भिक मस्यौदा आउँछ भनियो ,मस्यौदा होइन,राजनीतिक प्रतिबद्दता ल्याउन छलफल चल्यो तर त्यही पनि नआएपछि प्रश्न अनत्तरित छ,संविधान अब कहिले ?
प्रमुख दलहरुले बाचा गरेअनुसार ८ माघमा नयाँ संविधान दिनु त परै जाओस् ‘चाँडै संविधान ल्याउने’ सामूहिक प्रतिवद्दता र आत्मालोचनासमेत गर्न सकेनन् । बिहीबार मध्यरातसम्म चलेको संविधानसभा बैठकमा एमाओवादीसहित विपक्षी मोर्चामा आवद्द दलहरु नाराबाजीमा व्यस्त बने भने कांग्रेस–एमाले लगायतका सत्तारुढ दलहरु विपक्षीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिएको आरोप लगाएर बसे ।
संविधानसभाको आस गरेका नेपालीले माघ ८ को मध्यरातमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको सम्बोधनमै चित्त बुझाउनुपर्यो । संवैधानिक र कानुनी समयसीमा नभए पनि आफूले जनाएको कानुनी समयसीमा नभए पनि आफूले जनाएको नैतिक प्रतिवद्दताबाट समेत प्रमुख दलहरु विमुख भए ।
सहमति वा संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने द्वन्द्वमा प्रमुख दलहरु रुमल्लिएको अवस्थामा ८ माघमा संविधान नआउने स्पष्ट भइसकेको थियो । तैपनि,दलबाट चामत्कारिक निर्णयको अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका थिए । चारवर्षे कार्यकालको पहिलो संविधानसभामा पनि संविधान नबनाइकनै १४ जेठ २०६९ मा विघटन भएको थियो । नयाँ पत्रिका